कोरोना लागेका नेपालीको उपचार कसले गर्छ ? स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले गरे यस्तो खुलासा — Imandarmedia.com
कोरोना लागेका नेपालीको उपचार कसले गर्छ ? स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले गरे यस्तो खुलासा
काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले नागरिकहरू सेल्फ क्वारेनटाइनमा बस्नुपर्ने बताएका छन्। ज्वरो आएमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र कोरोनाभाइरस संक्रमण शंका लागेमा राज्यले नै उपचारको व्यवस्था मिलाउने उनले खुलासा गरे।
‘अब सेल्फ क्वारेनटाइनमा मानिसहरू बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘के गर्ने के नगर्ने भन्ने प्रोटोकल हामीले तयार पारिसकेका छौं। घरमा बस्दा एक अर्का सदस्यसँग कति दूरीमा बस्नेलगायतका कुरा प्रोटोकलमा छ।’ उनले ज्वरो र रूखाखोकी आएमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको बताए। ‘परीक्षण गर्दा अस्पतालमै राखेर थप उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिए मात्रै राज्यले जिम्मा लिन्छ,’ मन्त्री ढकालले भने।
सत्तारूढ नेकपाको भातृ युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि मंगलबार मन्त्रालयमा मन्त्री ढकालले चीनबाट विद्यार्थी ल्याएर क्वारेनटाइनमा राखे जसरी अब राख्न नसकिने पनि बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उनले बताए।
‘कुनै व्यक्तिमा संक्रमण देखिए त्यसको जिम्मा सरकार लिन्छ,’ उनले भने। क्वारेनटाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था देखिए खरिपाटीमा राखिने उनले बताए। ‘क्वारेन्टाइन भन्ने वित्तिकै मान्छेहरुले हिजो चीनबाट विद्यार्थी ल्याएर सरकारले गर्ने, सरकारकै व्यवस्थापनमा गर्ने भन्ने कुरा नगरौँ। अब सेल्फ (आफै) क्वारेन्टाइनमा मान्छे बस्नुपर्छ,’ उनले भने।
यता अर्थ, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले कोरोनाबारे सबैलाई सचेत रहन र अफवाह नफैलाउन आग्रह गरे।
औषधि एवं अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिबारे सरोकारवालासँग सरकारले मंगलबार प्रधानमन्‍त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा गरेको छलफलपछि बोल्दै खतिवडाले कोरोनासँग सबै सचेत हुनुपर्ने बताए। कोरोनाबारे सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना प्रवाह गर्ने बताउँदै उनले व्यक्ति पिच्छे डाक्टर नबन्‍न सबैलाई आग्रह गरे।
यस्तै, सरकार समक्ष ६ महिनालाई पुग्‍ने खाद्यान्‍न, ३ महिनालाई पुग्‍ने इन्धन र४ महिनालाई पुग्‍ने औषधि रहेको जानकारी दिए। मन्त्री खतिवडाले भारतसँग अहिले हुने व्यापारमा कुनै बाधा अवरोध नभएको बताए। चीनमा संक्रमण कम हुँदै गएकाले अब सरकारले उत्तरी नाकाहरुमा रहेका सामान ल्याउनेतर्फ सोच्‍ने बताए।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बजारमा मास्कको अभाव नहुने बताए। उनले दैनिक १५ हजार थान मास्क उत्पादन भइरहेको बताए। उनले व्यपारीहरुलाई सस्तो मूल्यमा मास्क बेचिदिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले व्यापारीहरुलाई ५ रुपैयाँमा बेचिदिन आग्रह गरे। श्रेष्ठले विमानस्थलमा आउने सबैलाई सकेसम्‍म निःशुल्क रुपमा मास्‍क वितरण गर्न समेत आग्रह गरे।
यसैबीच कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न भन्दै सरकारले आजदेखि विश्वका आठ वटा देशका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न अन अराइभल भिसा बन्द गरिदिएको छ । अध्यागमन विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै मङ्गलबारदेखि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण धेरै देखिएका चीन तथा चीन प्रशासित क्षेत्र, इरान, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, स्पेन, फ्रान्स, र जर्मनीका नागरिकलाई अन अराइभल भिसा बन्द गरिएको जानकारी दिएको हो ।
तर यसअघि चीनबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएका १ सय ७५ जना नेपालीका लागि राज्यस्तरबाट भएको उद्धार एवं सरकारले नै क्वारेन्टीमा राख्ने अवस्था भने नरहेको मन्त्री ढकालले बताएका छन् । भवितब्य आइहाले खरिपाटीको क्वारेन्टाइनसहित काठमाडौं उपत्यकाका सबै ४३ वटै अस्पताललाई तमतयार रहन निर्देशन दिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या ४ हजार २५ पुगेको छ ।
कोरोनाको उद्भव मानिएको चीनमा सबैभन्दा बढि ३१ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने बाँकी ८ ‍सय ८९ जनाको विभिन्न २२ वटा मुलुकमा मृत्यु भएको छ । ४६ हजार २ सय ८४ जनाको अहिले पनि विश्वका १ सय १३ वटा मुलुकमा उपचार भइरहेको छ ।
संक्रमित भएका १ लाख १४ हजार २ सय ९९ मध्ये ६३ हजार ९ सय ९० जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । चीनपछि कोरोनाले इटालीमा महामारीको रुप लिएको छ । त्यहाँ ४ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ । थप ९७ जना संक्रमितको मृत्यु भएपछि त्यहाँ मृतकको संख्या ४ सय ६३ पुगेको हो ।